सांसदले अहिलेको महँगीबारे सोधे, मन्त्रीले पुरानो तथ्यांक देखाएर ढाँटे
गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले अघिल्लो वर्षको तथ्यांक प्रस्तुत गरी संसदलाई झुक्काएका छन् । जरुरी सार्वजनिक महत्त्वअन्तर्गत मूल्यवृद्धि र अनुगमनबारे गत २८ पुसमा छलफल चलेको थियो । त्यसमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले गत वर्षको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै अहिले बजारमा सांसदले भनेजस्तो समस्या नभएको जिकिर गरेका थिए ।
मन्त्री लम्सालले संसदलाई कसरी ढाँटे त ? जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा सांसदले प्रश्न उठाउँछन् । त्यसमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीले जवाफ दिने व्यवस्था छ । २८ पुसमा मूल्यवृद्धि र अनुगमनसम्बन्धी संसदमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिन उद्योगमन्त्री लम्साल रोस्टम पुगे । रोस्टममा उनले त्यससम्बन्धी चार पेजको लिखित जवाफ लगेका थिए । साथमा प्रदेश बजार अनुगमन नियमावली र नेपालको संविधान २०७२ थियो ।
छलफलमा सांसदले तेल, केराउ, अन्डा, फलामे रड, सिमेन्टलगायत वस्तुको भाउ बढेको भन्दै बजार मूल्य सुनाए । सांसदले अहिलेको बजारको कुरा गर्दै मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । मन्त्रीले भने पुरानो तथ्यांक देखाएर सांसदले भनेजस्तो मूल्यवृद्धि नभएको जिकिर गरिरहे ।
उनले संसदमा भनेका थिए, ‘भारतमा अहिले ३.३ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि छ । हाम्रो प्रमुख बजार भारत हो । त्यो भनेको हामीकहाँ ६.१५ प्रतिशत वृद्धि छ ।’ यो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा राष्ट्र बैंकले निकालेको गण्डकी प्रदेशको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वृद्धि दर हो । उद्योग मन्त्रालयबाट ‘मूल्यवृद्धिसम्बन्धी तथ्यांक’ माग भएपछि प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तथ्यांक दिएको थियो ।
संसदमा कांग्रेस सांसद ओमकला गौतम र जसपाकी धनमाया लामाले मूल्यसहित विस्तृत विवरण सुनाइन् । जवाफमा मन्त्री लम्सालले भने, ‘दुई जना माननीयले तथ्यांक ल्याउनुभयो । कहाँबाट ल्याउनुभयो कुन्नी !’
उनले सांसदलाई प्रदेश नीति तथा योजना आयोगबाट ल्याएको चार पाना कागज देखाए । त्यसपछि बोले, ‘नीति तथा योजना आयोगले स्टाटस पेपरमा राख्न बजार नै अध्ययन गरेर ल्याउनुभएको हो ।’ उनले संसदमा प्रस्तुत गरेको तथ्यांक झूटो होइन, तर सांसदले अहिले भइरहेको मूल्यवृद्धिबारे प्रश्न सोधेकोमा १ वर्ष पुरानो तथ्यांक प्रस्तुत गरे । बजारमा मूल्यवृद्धि ‘मानीनयहरूले भनेजस्तो छैन’ भनेर उनले झूट बोलेका हुन् ।
तिहारपछि बजारमा केही उपभोग्यवस्तुमा मूल्यवृद्धि देखिएको उपभोक्ता मञ्च गण्डकी अध्यक्ष कपिलनाथ कोइराला बताउँछन् । ‘झूटो बोल्ने कुरा छैन । तेलमा तिहारपछि अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएको छ,’ उनले भने, ‘चुनाव आउन लाग्यो र देशमा अस्थिर राजनीति हुन थाल्यो भनेर अनुचित फाइदा लिन खोजेका हुन कि !’
एकैपटक ७० रुपैयाँसम्म मूल्य बढ्नुको कारण खोजेर अनुगमन हुनुपर्ने अध्यक्ष कोइरालाले बताए । आफूहरूको केन्द्रीय समितिले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा यस विषयमा जानकारी गराउँदा पनि केही चासो नदिएको उनले गुनासो गरे । ‘तेलमा अनुगमन गर्नुपर्‍यो भनेर केन्द्रीय टिम गयो । जनशक्ति छैन भने । तर त्यही बीचमा ६० अनुगमन भएका थिए,’ अध्यक्ष कोइरालाले भने, ‘जहाँ मूल्यवृद्धि भएको त्यहाँ नगर्ने अनि अरु ठाउँमा ‘गरेझैँ’ गर्ने, यो नाटक हो । यसमा मिलेमतो छ ।’
खानेतेलको मूल्य ह्वात्तै बढेकोमा प्रदेश सरकारको अनुगमन गर्ने संयन्त्र पनि जानकार छ । तर, अधिकतम् बिक्री मूल्य नै प्रिन्ट भएर आएकाले आफूहरूले केही गर्न नसकेको प्रदेश बजार अनुगमन टोली संयोजक नारायण आचार्य बताउँछन् । ‘मैले घर वरपरकै तीन/चारवटा पसलमा हेरेँ । अनुगमनमा खरिद मूल्य र बिक्री मूल्य हेरिन्छ,’ उनले भने, ‘यहाँ त प्रिन्टमै एक्कासि बढेर आएकाले विभागलाई नै जानकारी गराउनुपर्नेछ ।’
आचार्य उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयका निर्देशकसमेत हुन् । आफूले बजारमा हेर्दा एक सय ८० रुपैयाँ प्रतिलिटरको सनफ्लोर तेल दुई सय ४० रुपैयाँ प्रिन्ट भएर आएको भेटेको निर्देशक आचार्यले सुनाए । निर्देशक आचार्यले भनेजस्तै पुस लागेसँगै खाने तेलबाहेक चामल, अन्डा, चियालगायतमा डेढ सय रुपैयाँसम्म मूल्यवृद्धि भएको छ । त्यसबाहेक फलामे रड, गिट्टी र बालुवाको मूल्य पनि नेकपाभित्रको राजनीतिक द्वन्द्वसँगै उकालो लागेको छ ।
डा. गिरिधारी शर्मा पौडेल, उपाध्यक्ष, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग
मूल्यवृद्धिसम्बन्धी तथ्यांक नेपाल राष्ट्र बैंकले बनाउँछ । बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार भएकाले त्यही तथ्यांक हामीले प्रयोग गर्ने हो । हाम्रोमा भारतीय बजारको सीधा प्रभाव पर्छ ।
भारतमा ३.३ थियो भने नेपाली रुपैयाँमा हिसाब गर्दा साढे ५ प्रतिशत हुन्छ । व्यापारीको मार्जिन र ढुवानी जोड्दा ६.४ प्रतिशत हुन्छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको असारसम्मको तथ्यांक हो । तत्कालको होइन । तत्कालको तथ्यांक अब बल्ल राष्ट्र बैंकले बनाउँछ । संसदमा कुरा उठेपछि मन्त्रालयबाट त्यो तथ्यांक माग भएको हो ।
मन्त्रीज्यू ! गफ नदिनुस्, महँगी बुझ्न बजार जानुस्
सांसदले मूल्यवृद्धिबारे सोधे, मन्त्री लम्सालले गुनगानमै समय सके
संसदमै मुख्यमन्त्रीलाई मन्त्रीको चुनौती : वैशाखमा चुनाव लड्ने हो, मेरो ठाउँमा मन्त्री खोज्नुस्
प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ ३, २०७७, २०:४८:००